DHEGEYSO-Warbixin kahadlaysa dhismaha maxjarka xoolaha ee Galkacyo. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Warbixin kahadlaysa dhismaha maxjarka xoolaha ee Galkacyo.
Oktoobar 13, 2016 4:04 b 0
Galkacyo, Oct 13 2016–Magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa kasocda dhismaha maxjar loogu talagalay in lagu kala wareejiyo xoolaha ka imanaya koonfurta Soomaaliya ee kuwa wajaha dekedda Boosaaso.
Dhismaha Maxjarkaasi oo meel wanaagsan maraya waxaa kadhashay xiisado kadib markiin maamulka Galmudug oo dhowr jeer duqeeyey goobta laga wado maxjarka, Shaafici Cabdulqaadir ayaa warbixintaan kadiyaariyey.
Xukuumadda Puntland oo DFS uga digtey ciidamo ay usoo dirto Galkacyo.
DHEGEYSO-Wasaaradda waxbarashada oo sagootisey arday deeq waxbarasho heshay.